Ireo diabeta dia mora tratran'ny otrikaretina Virus vaovao - News-Sinocare
Ireo diabeta dia mora tratran'ny aretina Virus vaovao
Fotoana: 2020-02-20 Hits: 145
Hatramin'ny faran'ny volana desambra 2019 dia nisy pnemonia mahery vaikan'ny epidemiolojia tsy fantatra niseho tany Wuhan. Tamin'ny Jan, 2020, ny antony nahatonga ny pnemonia dia nofaritana ho coronavirus vaovao. Ny tranga voamarina tanteraka tao amin'ny tanibe sinoa dia nahatratra 74,282 tamin'ny faran'ny 19 feb, ary teo amin'izy ireo dia marary 14,770 no sitrana.
Nanamafy ny ezaka natao hanakanana ny fihanaky ny virus coronavirus i Sina. Betsaka ny fikarohana momba ny coronavirus vaovao no azo tamin'izany fotoana izany. Raha ny tatitra nataon'ny gazety sinoa momba ny Epidemiolojia dia nitatitra, tamin'ny 11 feb, fa 44,672 no voamarina tranga, 10.5% ho an'ireo marary voan'ny aretim-po, diabeta (7.3%), hypertension (6.0%).
Ny haavon'ny glucose amin'ny fihoaram-pefy goavambe dia mety hampihena ny fiarovana ny hery fiarovan'ny diabeta toy ny fampihenana ny isan'ny sela CD3 + T, tsy fifandanjana ny tahan'ny sela CD4 + / CD8 + T, mampihena ny asan'ny sela NKT. Ny torolàlana momba ny fisorohana ny vaksininy sy ny fitsaboana ny gripa amn'ny vanim-potoana navoakan'ny CDC (Amerikanina) Komity Mpanolo-tsaina momba ny fomba fanaovana tsimatimanota (2013-2014) dia nanasongadina fa ireo olona voan'ny aretina metabolic (diabeta) dia atahorana mafy ahavitrika. Ny torolàlana teo aloha momba ny fitiliana sy ny fitsaboana ny valanaretina navoakan'ny Vaomieran'ny Fahasalamana Nasionaly (fanontana 2011) dia nanondro fa ireo marary manana aretina mitaiza dia mety hiteraka tranga mahery vaika aorian'ny fihanaky ny gripa.
Noho izany, ny diabeta dia mora voan'ny virus coronavirus vaovao.
Ny viriosy dia mety hiteraka fahavoazana maharitra amin'ny vatan'olombelona, ​​ary ny diabeta, miaraka amin'ny areti-mifindra amin'ny valanaretina, dia mety hiteraka hyperglycemia tsy voafehy, izay vao mainka mampitombo ny aretina, dia nivadika boribory ratsy fanahy tamin'ny farany.
Ny ratsy indrindra, ny hypoglycemia koa dia famoizana diabeta. Raha ny kajy amin'ny hyperglycemia dia isaina mandritra ny taona maro, ny faharatran'ny hypoglycemia dia tsy maintsy isaina ao anatin'ny minitra vitsy.
Mba hamaliana ny filan'ny fisorohana ny valanaretina, ny diabeta dia mila mijanona mandritra ny fotoana lava ao an-trano, dia mihena be ny hetsika ivelany, ary miaraka amin'ny sakafo tsy ara-dalàna aza. Ireo fiovana ireo dia mety hampitombo ny fiovaovan'ny glucose amin'ny rà.
Ho an'ireo marary T2DM, indrindra ireo marary efa antitra (mihoatra ny 70 taona), ny hypoglycemia dia miaraka foana amin'ny fiovan'ny glucose amin'ny ra, ary ny fiakaran'ny fiovan'ny glucose amin'ny rà dia mety hitarika hypoglycemia asymptomatika, hypoglycemia mahery ary hypoglycemia amin'ny alina.
Noho izany, ny teboka manan-danja amin'ny fitantanana diabeta mandritra ny valanaretina coronavirus vaovao dia ny fanamafisana ny fanabeazana ireo mararin'ny diabeta, ny fanaovana asa tsara amin'ny fiarovana ny tenany ao an-trano, ny fihenan'ny aretina mety hitranga araka izay azo atao ary ny fitantanana tsara ny haavon'ny glucose ao amin'ny ra , mijanona amin'ny sakafo ara-pahasalamana sy ny fotoanan'ny torimaso / ora fiakarana.
Ny famerana ny hetsiky ny olona, ​​ny fisorohana ny fifandraisana akaiky amin'ny olon-tsy fantatra, ny fanasana tanana / fanaovana sarontava amin'ny be matetika dia afaka manampy amin'ny famitana ny valanaretina amin'ny fomba mahomby.
Pejy mialoha: Torohevitra 5 ho an'ireo diabeta voan'ny valanaretina Virus
Pejy manaraka: Ny SAA & CRP dia mihatra amin'ny fisavana ny vaovao Virus pneumonia (NCP)